समाचार - के 1060nm डायोड लेजर स्लिमि Machine मेशिन जिद्दी बेली फ्याट, प्रेम ह्याण्डलहरू र अन्य शरीरको फ्याटको लागि एक राम्रो विकल्प हो?
यदि तपाईंले हठी पेटको फ्याट, प्रेम ह्याण्डलहरू र शरीरका अन्य किसिमका बोसोबाट छुटकारा पाउन यथासक्दो प्रयास गर्नुभयो भने, तपाईंले पक्कै पनि CoolSculpting का लागि धेरै टेलिभिजन विज्ञापनहरूमा ध्यान दिनु भयो। यी विज्ञापनहरूले यस नौंनभाइभ उपचारको फ्याटबाट छुटकारा पाउन सक्ने क्षमता हाइलाइट गर्दछ जुन आहार र व्यायाम पछि बाँकी रहन्छ जसले तपाईंलाई वजन घटाउन मद्दत गर्दछ। धेरै वर्ष बिरामीहरुको उपचार र हजारौं कस्मेटिक प्रक्रियाहरू गरिसकेपछि, म यो निष्कर्षमा पुगेको छु कि बिरामी गैरआइनभ्याभ उपचार धेरै बिरामीहरूका लागि उत्तम विकल्प हो। त्यो उपचार 1060nm डायोड लेजर स्लिमि machine मेशिन जलिरहेको फ्याट हो।
चिसो प्रयोगको सट्टा, १०60० एनएम डायोड लेजर स्लिमि machine मेशिनले लेजरहरूबाट तातो कोशाहरू मार्न प्रयोग गर्दछ। यो समान सामान्य प्रक्रिया छ — फ्याट सेलहरू लक्षित हुन्छन्, मारिन्छन् र बिस्तारै शरीरले उत्सर्जन गर्दछ। तपाईंको उपचार पछि केहि महिनाको अवधिमा, तपाईंले लक्षित क्षेत्रमा फ्याटमा कमी देख्नुहुनेछ।
१०60० एनएम डायोड लेजर स्लिमि machine मेशिन व्यक्तिहरूका लागि आदर्श हो जससँग जिद्दी बोसोको सानो क्षेत्र हुन्छ तर अन्यथा राम्रो शारीरिक स्थितिमा हुन्छन्। परिणामहरू स्थायी हुन्छन् जबसम्म बिरामीले उनीहरूको वजन र शारीरिक स्वास्थ्य कायम गर्दछ।
उपकरणको आकारले यो घुमाउरो शरीरका अंगहरूमा प्रयोग गर्न गाह्रो बनाउँछ, त्यसैले यो अन्य विकल्पहरू भन्दा अलि बढी सीमित छ। केही बिरामीहरूले गर्मीको कारण हल्का जलनको अनुभूति गराउँदछन्, यद्यपि उपचारको समयमा उपकरणमा चिसो छ।
१०60०nm डायोड लेजर स्लिमि machine मेशिनको साथ, त्यहाँ कुनै टक्सुको सक्शन वा पुलिंग हुँदैन। उपकरण तपाईं सink्कलन गर्न चाहानुहुन्छ क्षेत्रको माथि फ्लट राख्छ। लेजर ऊर्जा टिश्यूमा प्रवेश गर्दछ र बोसो कोशिकालाई थर्मल चोट पुर्‍याउँछ। तिनीहरू प्रोग्राम सेल सेल गुजर, र तपाईंको प्रतिरक्षा प्रणाली तिनीहरूलाई हटाउनेछ।
1060nm डायोड लेजर स्लिमि machine मेशिन अधिक सुविधाजनक छ
यदि तपाईं व्यस्त व्यक्ति हुनुहुन्छ (यी दिनहरू, को हैन?) १०60०nm डायोड लेजर स्लिमि machine मेशिनको साथ २ 25 मिनेटमा दुई क्षेत्रहरूको उपचार गर्दै क्रियोलाइपोलिसिस प्रति खण्ड प्रति एक घण्टा खर्च गर्नु बढी समयको बचतकर्ता हो। र किनभने त्यहाँ कुनै डाउनटाइम १०60० एनएम डायोड लेजर स्लिमि machine मेशिनको साथ छैन, तपाईं उपचार प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंको व्यस्त जीवनमा पछाडि जान सक्नुहुन्छ।